Posts By Xirfadlayaal Caafimaadka Haweenka
Goorma ayaad dib u bilaabi kartaa jimicsiga jirka ka dib
Waa muhiim in dib loo bilaabo jimicsi tartiib tartiib ah, oo taxadar leh ka dib marka lagu sameeyo qalliinka ilmo-galeenka. OBGYN-yada Dublin ayaa dib u eega waxa la filayo inta lagu jiro soo kabashada.
Sideen Dareemi Karaa Ka dib
Qalliinka ilmo-galeenka ee robotka ayaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto haddii aad qabto dhibaatooyin sida endometriosis. Baro sida soo kabashadu ula shaqeyso habkan ugu yar ee waxyeeleynta leh.
Qalitaanka Qalitaanka Robotic Vs. Laparoscopic. Waa maxay farqiga u dhexeeya?
Macluumaad wax ku ool ah oo ku saabsan aasaaska uur-ku-jirta yar, oo ay ku jiraan farqiga u dhexeeya qalliinka robotikada iyo laparoscopic
Tilmaamo waxtar leh oo ku saabsan wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato mammogram ka dib qalliinka kansarka naasaha, oo ay ku jiraan goorta, sababta, iyo inta jeer ee aad u baahan tahay mid
Sidee Ugu Dhawaan Ugu Soo Laaban Karaa Shaqada Kadib Qalitaanka Qalitaanka Robotic?
Baro waxa laga filan karo ka dib robotic hysterectomy, oo ay ku jiraan inta aad u baahan tahay inaad shaqada ka baxdo iyo goorta aad dib u bilaabi karto howlaha kale.
Annaga oo ah PWH waxaan ku faraxsan nahay inaan ku dhawaaqno xiriirkeenna cusub ee Aventiv Research.
Goorma La Raadinayaa Mammogram-ka haddii Kansarka Naasuhu uu ku dhex socdo Qoyska
Ogaanshaha kansarka naasuhu wuxuu waxtar badan la leeyahay baaritaanka naasaha sannadlaha ah. Baro waqtiga ugu fiican ee jadwalka naasaha ka-hortagga looga baahan karo rugtayada caafimaadka ee horumarsan.
Imtixaanada miskaha ee joogtada ah waa hab fiican oo lagu daryeelo caafimaadkaaga siilka. Baro waxa ku lug leh baaritaanka Pap smear iyo daryeelka dumarka wanaagsan guud ahaan.
Miisaan Miisaan Kuu Bixi Doonaa Kadib Qalitaanka Qalitaanka Robotikada?
Markaad la kulanto xanuun sagxada miskaha, burooyin, ama dhiig baxa makaanka, astaamo qalalaaseyn robot ah ayaa ku caawin karta.
Loading ... View More